Gabdha daren la,anta ah xiliga galmada - iftineducation.com
Gabdha daren la,anta ah xiliga galmada
iftineducation.com – Waxa laga yaabaa in aad iswaydiinayso maxuu u seexanayaa, adiguna aad doonasyo in uu kula sheekaysto. Hore ayaa waxa in badan looga hadlay, loo qoray muhiimada ay leedahay isfahanka, isu soo dhawaanta, dhunkashada, iyo isa salaaxida inta aan galmada la bilaabin. Taas oo la odhan karo in ay tahay hordhaca ciyaarta, kadibna ay ku xigto howsha dheer ee is dhexgalka ee wada raaxaysig oo ayaduna ah marka raaxaysigu marayo meel dhexe. Ugu dambayntiina ay haboon tahay in wada raaxaysiga lagu dhameeyo gabagabo.
Kurger ayaa waxa uu daraasadan ku sameeyay lamaanayaal..
tiradoodu ay dhamayd 450, kuwaas oo ahaa lamaanayaal aad ufirfircoon marka ay tahay dhinaca wada raaxaysiga. Waxa uu baadhitaanka ku ogaaday in lamaanayaasha soo jeeda marka ay la raaxaystaan lamaanahooda ay dhibsadaan marka ka kale uu hore ka gam’o. Guud ahaan waxa hore ka lulooday ragii la raaxaystay lamaanahooda, inkasta oo ay jireen hablo ayaguna ka hor lulooday ragoodii. Xiliyadii ay lamaanaha haweenka ahaa ay ka hor lu’loodeen lamaanahoodii ayaa waxa ragii rajeeyeen in ay lamaanahoodu ahaan lahaayeen kuwo soo jeeda iyo wada hadal fiican.
Gaas: Cali Khaliif Galeyr waxaa ku dhacay Cudurka Stockholm syndrome – VIDEO